चित्रकला एक साधना, लगाव, मेहनत र परिश्रमको उपज हो: ईशान परियार (चित्रकार) | News Polar
न्यूजपोलार आश्विन ०८, २०७८, शुक्रबार
कला पेशा हो कि होइन ?
ललितकला अन्तर्गत पर्ने चित्रकला अन्य विधाहरु जस्तै एक महत्वपूर्ण कलाको विधा हो । चित्रकला एक साधना, लगाव, मेहेनत र परिश्रमको उपज पनि हो । चित्रकला विधामा लागेर सर्वप्रथम प्राप्त गरिने भनेको आत्मसन्तुष्टि हो । दोस्राेमा कलाको माध्यमबाट सन्देश वा भाव सम्प्रेषण र तेस्राे अर्थोपार्जन ।
नेपालको सन्दर्भमा चित्रकलामा भाग्य खोज्नेको जमात धेरै पाइन्छ । तर चित्रकला नै कोरेर जीविकोपार्जन वा पेशाको रुपमा अगाल्नेको संख्या पनि अन्य पेशाको तुलनामा थोरै पाइन्छ तर पनि चित्रकला विधामा पेशागत रुपमा लागेर धेरै सम्भावनाहरु रहेका छन् । मेरो विचारमा चित्रकला नै मेरो पेशा हो र म यहि अंगालेर अघि बढिरहेको छु ।
चित्रकलाको के महत्व छ ?
पाषणयुगीन ढुङ्गे युगीन गुफा कला हुन् वा लियोनार्दोको मोनालिसा वा जेफ फुनका अत्याधुनिक मुर्तिकला चित्रकलाले सामाजिक सांस्कृतिक र आधुनिक महत्व बोकेको छ । हामीले खुट्टादेखि लगाउने जुत्तादेखि शीरसम्म लगाउने टोपीसम्म सबै कलाका नमूनाहरु हुन् । त्यसैगरी हामीले अंगाल्ने सबै गतिविधिहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कला वा विविध माध्यमहरुसंग सम्बन्धित रहेका छन् । संगीत, नृत्य बिना हाम्रो जीवन निरश हुन्छ । हामी कुनै मिठो पकवानमा ठाँटिन खोज्छौं, नाटक, चलचित्र हेरेर आनन्द लिन्छौ । सबै कतै नै कतै सिर्जनात्मक गतिविधिहरु जोडिएका हुन्छन् ।
नयाँ पुस्तालाई के कस्तो सम्भावना र अवसर छ ।
नयाँ पुस्तालाई धेरै अवसर र सम्भावनाहरु रहेका छन् । तथापि आफूमा रहेको कला र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई कायम रहेको कला र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । धेरै साधना, अभ्यास, र उचित अवसरबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ तर धैर्यताको धेरै खाँचो हुन्छ । राम्रो चित्रकला गर्न सक्ने आफ्नोपन र छविलाई कायम गर्न सके छुट्टै छाप छोड्न सकिने र त्यस्तो आफ्नो छुट्टै नाम (ब्राण्ड) सृजना गर्न सक्ने हुन्छ । जस्ले राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सघाउँछ । तसर्थ चित्रकला झैं अन्य क्षेत्रमा लागेर पनि केही गर्न सकिन्छ, जस्तै डिजाइन, शिक्षण, कला निर्देशन, इत्यादि, कला पदाधिकारी, समीक्षक कलालेखक, कार्टुनिष्ट आदि ।
चित्रकला प्रति राज्यको नीति कस्तो छ ।
सरकारको तर्फबाट स्पष्ट कला नीति र कलाकारलाई हेर्ने दृष्टि प्रष्ट नभएको जस्तो लाग्छ । कलाकारलाई उचित सुविधा र अवसरको अभाव रहेको छ । सरकारी निकाय (नाफा) बाट पनि आशातित उल्लेखनीय काम गर्न सकेको आभाष भएको छैन । विद्यालय तहमा सृजनात्मक चित्रकलाको माध्यम पाठयक्रम तयार भएर लागू भएपनि चित्र, मूर्ति, संगीत जस्ता कलाहरु शिक्षक वा अन्य विषयका शिक्षकहरुले पढाउनु पर्ने बिडम्बना रहेको छ । सरकारले यससम्बन्धी दरबन्दीको व्यवस्था गरे बर्सेनि ललितकला क्याम्पसहरुबाट स्नातक, स्नातकोत्तर गर्ने कला विद्यार्थीहरुलाई रोजगारी र उचित व्यवस्था हुने हो भने विद्यार्थीहरुले विद्यालय स्तरदेखि नै उचित कलाको शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त गर्ने थिए ।
अहिलेको सन्दर्भका कलाको अवस्था कस्तो छ ?
विश्वपरिवेश नै आक्रान्त र कोभिडमय भएको यो अवस्थामा अन्य क्षेत्र जस्तै कलाको क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । कलाका पारखी विदेशीहरु पनि भ्रमणमा आउन पाइरहेका छैनन् । त्यस्तै स्वदेशी कलाका पारखीहरुलाई पनि आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारो स्थिति छ । कला किनबेचको स्थिति कम नै भएपनि कला शिक्षण, अनलाइन कक्षा, डिजाइन, इलस्ट्रेसन जस्ता माध्यमबाट केही न केही सपोर्ट भएको छ । तथापि कलाको क्षेत्रको भविष्य राम्रो भने हुँदै गएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ०८, २०७८, २१:०६:३७
हाम्रो क्षति हाम्रो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, धनी देशहरुले दिनुपर्छ: डा. धर्मराज उप्रेती जलवायुविज्ञ (भिडियो सहित)